Namoaka ofisialy ny ivon-toeran'ny zanabolana fizakan-tany momba ny fizahantany any Kenya ny Minisitry ny fizahantany ao Jamaika
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Namoaka ofisialy ny ivon-toeran'ny zanabolana fizakan-tany momba ny fizahantany any Kenya ny Minisitry ny fizahantany ao Jamaika
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Edmund Bartlett momba ny diplomasia vaksiny
Ny ivon-toerana Satelite momba ny fizahan-tany momba ny fizahantany any Kenya dia natomboky tamin'ny fomba ofisialy avy amin'ny mpanorina sy mpiara-mitarika ny Global Tour Resilience and Crisis Management Center ary Fizahan-tany any Jamaika Minisitra, Hon. Edmund Bartlett. Ity dia taorian'ny fifanakalozan-kevitra voalohany hananganana ity Ivotoerana Satelita ity ao amin'ny Oniversite Kenyatta roa taona lasa izay.
“Ny fananganana an'ity Ivotoerana Satelita ity ao amin'ny Oniversite Kenyatta dia hanitatra ny fanatontosana ny Global Resilience Center. Faly manokana aho satria ho fananana ilaina amin'ny fampiroboroboana ny faharetan'ny fizahan-tany sy ny faharetana eo amin'ireo toerana afrikanina atsinanana.
Ho fanampin'izany, ny Ivotoerana Satelita any Kenya dia ho ivon'ny fampandrosoana, fandrindrana ary fanohanana ny fananganana faharetana ary ny ezaka valiny ", hoy i Hon Edmund Bartlett.
Nasongadin'ny minisitra Bartlett ihany koa fa "Ny fizahan-tany any Afrika Atsinanana dia ao anatin'ny toerana tsara kokoa hiverenana haingana aorian'ny fisavorovoroana. Ny filàna faharetana amin'ny fizahan-tany dia nanjary be pitsikiny satria nanjary fahita matetika ny fandrahonana ary ny fanatrehan'ny Birao Atsinanana GTRCMC dia hanatsara ny fahafahan'ny sehatry ny fizahantany manerana ny firenena afrikanina 16. ”
Araka ny filazan'ny Prof. Lloyd Waller, ny Tale Mpanatanteraka ny GTRCMC, "Ny Ivotoerana Satelika Atsinanana Atsinanana dia ampahany amin'ny tambajotran'ireo ivon-toerana manerantany manerantany izay miara-miasa ho toy ny toeram-pisainana manerantany hiatrehana ireo fanamby manerantany sy isam-paritra ho an'ny fizahantany. sehatra amin'ny alàlan'ny fizarana vaovao. Efa nisy ny ezaka niarahanay niasa mikasika ny fanarenana ny fizahan-tany dia nanaporofo ny fampiasana izany fomba izany hanoherana ny fizahan-tany. "
"Amin'ny farany, ity ivon-toerana ity dia ho lasa mpiorina lehibe amin'ny fampandrosoana fizahan-tany maharitra ary hiantoka ny fizahan-tany ataon'ny mpizahatany manerantany sy hamaly ny tsy fahazoana antoka eo amin'ny tontolo anatiny sy ivelany," hoy i Hon Edmund Bartlett nanampy.
Niorina tamin'ny taona 2017 ary nipetraka tao amin'ny The University of the West Indies, ny tanjon'ny Global Tourism Resilience and Crisis Management Center dia misy ny fanampiana ireo toerana fizahan-tany maneran-tany miaraka amin'ny fahavononan'ny tanjona, fitantanana sy fanarenana amin'ny fikorontanana sy / na krizy izay misy fiatraikany amin'ny fizahan-tany sy mandrahona toekarena sy asa fivelomana manerantany. Ny GTRCMC dia manana birao any Karaiba, Afrika, ary ny Ranomasina Mediteraneana ary ireo mpikambana ao amin'ny firenena 42 mahery.
Nozaraina teto ny fanamarihana nataon'ny minisitra Bartlett:
Telo taona lasa izay, naka tahaka ny ivon-toerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy (GTRCMC) aho nandritra ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana maharitra UNWTO natao tao Montego Bay, Jamaika, ny volana novambra 2017. Ny tolo-kevitry ny fananganana ivon-toerana Resilience Center dia taratry ny fiantsoana andraikitra ho an'izao tontolo izao. ireo mpandray anjara amin'ny fizahan-tany mba hiara-hamaly amin'ny fiaraha-miasa, ivon-toerana ary eo amin'ny andrim-panjakana ny fandrahonana nentim-paharazana sy tsy nentim-paharazana izay nanelingelina ny fizahan-tany manerantany. Ny andraikitry ny Ivotoerana dia ny famoronana politika, fitaovam-pitaovana ary torolàlana natao hanatsarana ny fahafahan'ny toerana fizahan-tany marefo manerana an'izao tontolo izao mba hanalefahana ny loza mety hitranga amin'ny loza ary koa hitantanana ny ezaka fanarenana aorian'ny krizy.
Ho fanitarana ny fanatontosana ny ivon-toerana Resilience Center dia nandray fanapahan-kevitra ny Biraon'ny Ivotoerana hanangana Ivotoerana Satelita efatra hanompo ny faritra sy ny faritra ambanin'izao tontolo izao. Ny roa amin'ireo Ivotoerana Satelita ireo dia efa nosokafana tany Kenya ao amin'ny anjerimanontolo Kenyatta sy Nepal miaraka amina drafitra hapetraka hananganana hafa any Hong Kong, Japan, ary Seychelles. Faly manokana aho amin'ny fananganana ity Ivotoerana Satelita ity ao amin'ny Oniversite Kenyatta. Izy io dia ho fananana manan-danja amin'ny fampiroboroboana ny fahaizan'ny fizahan-tany sy ny faharetana eo amin'ireo toerana atsy Afrika Atsinanana. Noho ny fametrahana ity teboka ifantohana ity amin'ny fampandrosoana, fandrindrana ary fanohanana ny ezaka fananganana faharetana sy ny valiny, ny fizahan-tany any Afrika Atsinanana dia manana toerana tsara kokoa hiverina haingana aorian'ny fisavorovoroana.
Rehefa miady amin'ny areti-mandringana COVID-19 izao tontolo izao dia zava-dehibe ny manamarika fa ity krizy ity dia mety tsy ho ny farany amin'ny karazany sy ny fiantraikany. Nandritra ny taona maro dia nampitandrina aho fa ny fandrahonana toy ny areti-mifindra sy ny valanaretina, ny fiatraikany amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ary ny olana amin'ny fiarovana ny cyber dia ho lasa fomba vaovao amin'ny tontolo mivoatra haingana sy mifamatotra. Rehefa miha mahazo vahana ireo fandrahonana ireo dia hihazakazaka kokoa ny fahazakan'ny fizahan-tany mba hahazoana antoka fa ny fizahantany manerantany dia afaka mampifanaraka sy mamaly ny tsy fahazoana antoka eo amin'ny tontolo anatiny sy ivelany. Amin'ny farany, ity Ivotoerana ity dia ho lasa mpiorina lehibe amin'ny fampandrosoana maharitra fizahan-tany.
Raha mijery ny ho avy isika, ny GTRCMC dia hanohy hanamafy ny fiaraha-miasa amin'ny tambajotran'ireo mpiara-miasa eo an-toerana, isam-paritra ary iraisampirenena mba hanalefahana ny fiantraikan'ny areti-mandringana any amin'ny toerana itodiana ary koa ny hamantarana ireo paikady mahomby amin'ny fanarenana azy ireo ary hanatsara ny fahavononany ary mamaly ny hatairana amin'ny ho avy. Amin'ny vanim-potoana akaiky sy azo jerena, ny Ivotoerana dia takiana andraikitra lehibe hanohanana ny fitantanana ny krizy eran-tany, ny fanalefahana ary ny ezaka fanarenana amin'ny sehatry ny fizahantany. Andraikitra iray no andraisan'ny Ivotoerana andraikitra matotra, ary mikasa ny hanamafy ny fiaraha-miasa misy izahay ary hanangana olom-baovao miaraka amin'ny tanjona faratampony hiantohana ny indostrian'ny fizahan-tany mailaka, mahay mandanjalanja ary maharitra amin'ny vanim-potoana aorian'ny COVID. Ny drafitra akaiky anay dia misy ny famolavolana fanavaozana isan-karazany, fitaovam-pitaovana ary loharanom-pahalalana hanampiana ireo toeran-kaleha manerantany hamakivaky ity fotoan-tsarotra ity.
Antenaiko fa ity forum ity dia hanome fifanakalozam-pahalalana ilaina amin'ny raharaha toy ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fananganana fiaretana fizahan-tany; rafitra momba ny fenitra, firindrana ary fiaraha-miasa amin'ny paikadim-pizahanana fizahan-tany manerana ny faritra; ny fahaizan'ny modely fizahantany vaovao izay tsy mifamatotra amin'ny tsena ivelany; ny fampiasana ny fanavaozana sy ny haitao amin'ny ezaka fanalefahana sy valiny; ny maha-zava-dehibe ny hetsika fikarohana, fanofanana ary famatsiam-bola; ary ny anjara asan'ny fiaraha-miasa lalindalina kokoa eo amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy raharaham-pirenena. Amin'ny maha mpiara-mitarika amin'ny GTRCMC ahy dia faly aho mizara an'ity zavatra niainana ity ary mino ny momba ny dia ho avy aho.
State of the Hotel Industry 2021: Tsy andrasana ny fiverenan'ny asa raha tsy amin'ny 2024
FAA dia nanambara Tampa Bay 'No Drone Zone' mandritra ny Super Bowl LV
25 minitra lasa izay